Barcelona Oo Lasoo Wareegtay Yusuf Demir – Garsoore Sports
Barcelona Oo Lasoo…
Barcelona Oo Lasoo Wareegtay Yusuf Demir
Kooxda kubbada-cagta Barcelona ayaa dhammeystiray saxiixa xiddiga u dhashay dalka Turkiga ee Yusuf Demir.
Warbixin ay soo saartay Barça ayaa shaaca ka qaaday in kooxda ay bixinayso € 500,000 oo amaah ah si loo helo adeega Demir helo inta lagu jiro ololaha 2021/22. Ikhtiyaarka ‘aan khasab ahayn’ oo xiddigan si toos ah ay ugu iibsan karaan ayaa lagu sheegay € 10 milyan.
Yusuf oo 18 sanno jir ah ayaa u safta kooxda Rapid Vienna ee dalka Austria waxaana uu ka cayaaraa booska khadka dhexe ee weerarka.
Barcelona ayaa la soo wareegtay 18 jirka reer Austria ee Yusuf Demir oo ay kala soo wareegtay kooxda Rapid Vienna heshiis amaah ah xilli ciyaareedka 2021/22, iyada oo dookh u leh in ay heshiiska ka dhigto mid joogto ah xagaaga dambe.
Demir ayaa kaliya 18 jirsaday bishii la soo dhaafay wuxuuna jiray 16 sano markii uu kulankiisii ugu horreeyay u saftay kooxda Rapid dhammaadkii 2019. In kasta oo uu ku dhashay Turkiga, wuxuu ku noolaa Austria ilaa yaraantiisii wuxuuna kulankiisii ugu horreeyay ee caalami ah u saftay waddankiisa bishii Maarso.
Da’yarkan hibada leh ayaa la filayaa inuu la midoobo asxaabtiisa Barcelona B goordhow isagoo isku deyi doona inuu kooxda koowaad boos ka helo haddii uu bandhigyo wanaagsan soo bandhigo ololohooda isku diyaarinta xilli-cayaareedka ka horreeye amaba inta lagu gudajiro sannad-cayaareedka 2021-2022.